किन चलेन मुद्दा | नेपाल इटाली डट कम
किन चलेन मुद्दा
January 4, 2013 — nepalitaly
‘डनहरु’सँग अर्बौँ अवैध सम्पत्ति
केपी, ढुंगाना/सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस २० – चार ‘डन’ राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे), मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन), गणेश लामा र कृष्णबहादुर बस्नेत (पर्शुराम) को अवैध सम्पत्तिको बहिखाता तयार भइसक्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको दुई वर्षे मिहेनतले मुद्दा अदालतमा लैजान परिपक्व बनिसक्यो। तर, निर्णयकर्ता अझै निर्णयहीन छन्। अनुसन्धान स्रोत अनुसार विभाग र ब्युरोका अधिकारीले एक हप्ता थप मिहेनत गर्ने हो भने यी चारैविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रशस्त आधार तयार भइसक्यो।
चारै जनाको चल-अचल सम्पत्ति विवरण र बयान सकिइसक्यो। स्रोतका अनुसार उनीहरुले अस्वाभाविक रुपमा धनसम्पति जोडेको प्रमाण जुटिसकेको छ। विभाग तत्पर हुने हो भने अनुसन्धानकर्ताको टिप्पणी र सरकारी वकिलको रायपछि मुद्दा दायर गर्न कानुनी अड्चन छैन। तर, अनुसन्धान सकिए पनि सरोकारवाला निकायले मुद्दा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन्।
विभागको अनुसन्धानको पहिलो प्राथमिकतामा परेका गणेश लामा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
गृहमन्त्रीको आशीर्वादले उनले अहिले मुलुकको राजधानी काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख आफ्नो रोजाइको पठाउन सक्ने हैसियत बनाइसके।
दिपक मनाङे राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यत्ति परिचित नभएको दल संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् नै। उनीमाथि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएको दलका नेताको राम्रो भरथेग छ।
पर्शुराम बस्नेत एमालेका कट्टर कार्यकर्ता भइगए। उनी एमाले मोरङको जिल्ला सदस्य अनि युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा छन्। अवैध हतियार बोकेको अभियोगमा केन्द्रीय कारागारमा रहे पनि चक्रे मिलन राजनीतिक संरक्षकहीन भइसकेका छैनन्।
अनुसन्धानस्रोतका अनुसार ब्युरो र विभाग अधिकारीले हिम्मत गर्ने हो भने गणेश लामाको मुद्दा एकै सातामा विशेष अदालतसम्म पुग्न सक्छ। तर, लामाको अकुत सम्पत्तिको फेहरिस्त खोज्ने जिम्मेवारी पाएको ब्युरो गृहमन्त्री गच्छदारको चरम दबाबमा छ।
उच्चस्रोतका अनुसार लामालाई ब्युरोबाटै ‘क्लिन चिट’ दिलाउन गृहमन्त्री गच्छदारले ब्युरोको प्रमुख परिवर्तनको प्रयासदेखि तल्लो तहका प्रहरीलाई बोलाएर ‘लामाको पछि नलाग्न’ धम्क्याउनसमेत भ्याइसके।
दिपक मनाङे, चक्रे मिलन अनि पर्शुरामले समेत अनुसन्धानलाई अगाडि बढ्न नदिन राजनीतिक दबाब बढाउने नै भए। आफ्नै प्रकृतिका अन्य मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो भने भोलिका दिन अप्ठेरो पर्ने भएकाले लामाको समेत सहयोग पाइरहेका छन् उनीहरुले।
आखिर केले जोगाइरहेको छ, यी चारै जनालाई, यही फेहरिस्त नै काफी छ। यसलाई थप पुष्टि गर्दै अनुसन्धानको नेतृत्वकर्ता विभागमा महानिर्देशक विश्वप्रकाश सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘खुला क्षेत्रमा कार्यालय छ। प्रहरीको सुरक्षा छैन। ज्यान जोखिममा राखेर मुद्दा किन अगाडि बढाउने ?’
राजनीतिक संरक्षणप्राप्त उनीहरुको मुद्दा हेर्ने विभागमा आठ पटक प्रमुख फेरिइसके। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आफू अनुकूल प्रहरीलाई प्रमुख बनाउने कसरत जारी छ। पछिल्लो चार वर्षमा विभागमा ८ जना प्रमुख परिवर्तन भइसके।
डनका अवैध सम्पत्तिको फेहरिस्त खोज्न विभागलाई सहयोग पु¥याइरहेको ब्युरोका प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धान घेरामा रहेकाहरुको राजनीतिक प्रभाव र मुद्दा प्रक्रियामा भएको ढिलाइबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्। ‘विभागसँगको समन्वयमा अनुसन्धान अधिकृतहरु सक्रिय छन्,’ ब्युरोका एसएसपी उत्तम कार्कीले प्रहरीको औपचारिक भाषामा भने, ‘अनुसन्धान प्रगतिउन्मुख छ।’
कसको कति सम्पत्ति ?
राष्ट्र बैंकमा रहेको इकाइले गरेको अनुसन्धानमा ‘डन’ हरुले पारिवारिक सदस्य, नातेदार र कामदारको नामबाट सम्पत्ति खरिदबिक्री गरेको देखिएको छ। उनीहरुले बढीजसो ७० वर्ष उमेर पुगेका पारिवारिक सदस्य र कामदारका नामबाट आर्थिक कारोबार गरिरहेको स्रोत बताउँछ। यसमा घरजग्गा कारोबार र राजनीतिक आड पाएका व्यापारीको पनि संलग्नता देखिएको स्रोतले बतायो।
उच्चस्रोतबाट नागरिकले प्राप्त गरेको यी चारै जनाको सम्पत्ति विवरणमा चल सम्पत्ति न्यून देखिए पनि अचल सम्पत्ति भने मनग्गे छ। सबैभन्दा लामो सम्पत्तिको फेहरिस्त लामाको देखियो।
काभ्रे खहरेपाँगु स्थानीय र कोटेश्वर महादेवस्थान अस्थायी ठेगाना रहेका लामा र उनको परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी, पेट्रोल पम्प र जग्गामा प्रसस्त लगानी रहेको खुल्यो।
लामा, उनका बाबु, श्रीमती र भाइका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अनुसन्धान अधिकारीले फेला पारेका छन्। लामाको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २ सय ५ रोपनी जग्गा खुलेको छ।
उनको बाबुका नाममा भक्तपुरमा ७ आना र काभ्रेमा करिब ३६ रोपनी जग्गा देखिएको छ। उनको श्रीमतीको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका १० वडामा तीन आना तीन पैसा जग्गामा बनेको तीनतल्ले घर छ। उनका दुई जना भाइको नाममा करिब १५ रोपनी जग्गा खुलेको छ।
उनको आमाको नाममा काभ्रेमा करिब पाँच रोपनी जग्गा देखियो। लामाको नाममा प्राडो, मारुती कार, निजी लोडर स्काभेटर लगायत आठ वटा सवारीसाधन खुलेको छ।
अचल सम्पत्तिको तुलनामा उनी र उनको परिवारको नाममा नगद मौज्दात भने न्यून छ। लामाको नाममा विभिन्न बैंकमा जम्मा ५३ हजार सात सय रुपैयाँ मौज्दात र एक हजार आठ सय अमेरिकी डलर मात्र खुलेको छ।
उनको भाइका नाममा एक लाख १६ हजार रुपैयाँ र एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर, बाबुका नाममा ५९ हजार रुपैयाँ श्रीमतीका नाममा सात हजार सात सय रुपैयाँ मौज्दात फेला परेको छ।
उनको नाममा सिरुवा निर्माण कम्पनी, वाइबा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, स्मृति निर्माण फर्म र मेलम्ची क्रसर उद्योग दर्ता छ। सिरुवाको नाममा विभिन्न बैंकमा दुई लाख २२ हजार रुपैयाँ र पाँच हजार चार सय अमेरिकी डलर, वाइबाको नाममा चार हजार रुपैयाँ, स्मृति निर्माणका नाममा १० हजार रुपैयाँ र १९ हजार डलर र मेलम्चीका नाममा ७२ हजार रुपैयाँ फेला परेको छ।
सिरुवामा उनका नाममा ८२ लाखको सेयर खुलेको छ भने स्मृतिमा १५ लाख, दाजुको नाममा १० लाखको सेयर छ। रात्रिकालीन व्यवस्थामा सक्रिय भए पनि ठमेलको बियर बारमा मात्र आठ प्रतिशत सेयर खुलेको छ। कोटेश्वरमा उनको नाममा जिएलएन आयल स्टोलमा पाँच लाख लगानी र पुरानो बानेश्वरमा उनको भाइका नाममा न्यु लक्ष्मी आयल स्टोलमा पाँच लाख लगानी देखिएको छ।
लामापछि धनी देखिएका पर्शुरामको पनि नगद मौज्दात धेरै खुल्न सकेको छैन। उनी र उनका सहयोगी मुकेश बस्नेतका नाममा मोरङमा ४२ रोपनी जग्गा खुलेको छ। मोरङमा उनको श्रीमती र सहयोगीका नाममा घर तथा जग्गा भए पनि ती सबै बिक्री गरिसकेको देखिएको अनुसन्धान स्रोतले बतायो।
उनका नाममा तीन वटा गाडी र तीन वाट मोटरसाइकल खुलेको छ। पर्शुराम र उनको सहयोगीका नाममा एडजोन एड्भरटाइजिङ, पिआर हार्डवेयर, बगलामुखी बिल्डर्स, गजलक्ष्मी ट्रेड, मेरो ट्राभल्स, वेलकम पार्टी प्यालेस र टेकेन्द्र निर्माण सेवा छ। पर्शुरामका नाममा नेपाल बजार इन्टरनेसनलमा २१ हजार कित्ता सेयर फेला परेको छ।
दिपक मनाङेको नाममा कुनै पनि अचल सम्पत्ति फेला परेको छैन। उनको श्रीमतीका नाममा काठमाडौंमा करिब तीन रोपनी जग्गा र घर तथा नुवाकोटमा ७७ रोपनी १३ आना जग्गा फेला परेको छ।
उनको गोसाइकुण्ड क्रसर रोडा ढुंगाको नाममा मकवानपुरमा १४ कट्ठा जग्गा खुलेको छ। विभिन्न बैंकमा उनको नाममा दुई हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ खुलेको छ भने उनकी श्रीमतीका नाममा ५६ हजार देखिएको स्रोतले बतायो। दिपकको नाममा गोसाइकुण्ड क्रसर, ओम मल्टिपरपोज, इच्छामाई र वेस्ट पोइन्ट ढुंगा रोडामा गरी करिब ५० लाख सेयर लगानी रहेको अनुसन्धानस्रोतले फेला पारेको छ।
अन्य तीन जनाको तुलनामा चक्रे मिलनको चल÷अचल दुवै सम्पत्ति कममात्र खुलेको छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा उनको नाममा सात आना जग्गामात्र खुल्यो।
उनको परिवारको नाममा काठमाडौं र गोरखामा गरी करिब ३० रोपनी जग्गा देखियो। ब्युरो र विभागका अनुसन्धानकर्ताले उनका नाममा कुनै सवारीसाधन फेला पारेनन्। उनको परिवारका नाममा दुई वटा कार र एउटा स्कुटर खुल्यो।
बैंकमा उनका नाममा दुई लाख ४८ हजार रुपैयाँ देखियो भने परिवारको सदस्यका नाममा करिब दुई लाख रकम खुल्यो। उनका भाइ तेजेन्द्रका नाममा तीन हजार देखियो।
सम्पत्ति रोक्दा ‘कालोसूची’मा
स्रोतका अनुसार ब्युरो र विभागका अनुसन्धान अधिकृतले यी चारसहित उनका परिवार र आफन्तसँग बयान लिइसकेका छन्। बयान लिने क्रममा चारै जना र उनका परिवारका सदस्यले फेला परेका सबै सम्पत्ति वैध भएको दाबी गरेका थिए।
‘केहीले पैतृक सम्पत्ति भएको दाबी गरे,’ स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांशको निश्चित आम्दानीको बाटो नखुले पनि ठेक्कापट्टालाई आम्दानीको आधार देखाए।’
अनुसन्धानक्रममा खुलेका वित्तीय विवरणका आधारमा उनीहरुले अधिकतम सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धान अधिकारीको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानमा खुलाउन सकेका अधिकांश सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का राखेको छ। सम्पत्ति रोक्का हुँदा अन्य प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको नदेखिए पनि गणेश लामा भने ऋण नतिरेको भन्दै कालोसूचीमा परिसके।
स्रोत अनुसन्धानमा खुलेका सम्पत्ति स्रोतको वैध आम्दानीको आधार देखाउन नसकेकाले जति खुलेको छ, त्यसका आधारमा मुद्दा अगाडि बढाए पनि उनीहरु दण्डित हुने अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीको दाबी छ।
विभागका निर्देशक सुवेदी विभाग मातहतै प्रहरी परिचालनको अधिकारसहित अन्य सांगठनिक सुधार भए अनुसन्धान प्रक्रियालाई चुस्त रुपमा अगाडि बढाउन सकिने बताउँछन्।
ब्युरो स्रोतका अनुसार कानुन अनुसार विभागले प्रहरीलाई अनुसन्धान अधिकृत मात्र तोकेको र ब्युरोले सरकारी वकिलमा पठाएको राय स्वीकृतिपछि विभागले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। ‘विभागका अधिकारी नै राजनीतिक स्थायित्व नभई कारबाही गर्न अप्ठेरो छ भन्छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘अनुसन्धान विवरण चाँडो पठाउन ताकेता आए कुनै समस्या छैन।’
विभाग र ब्युरोले दिपक, चक्रे, गणेश र पर्शुरामसँगै अन्य सातको सम्पत्ति स्रोतसमेत अनुसन्धान सूचीमा राखेको छ। स्रोतका अनुसार अभिषेक गिरी, बलराम सापकोटा, कविन शाक्य, कुमार आचार्य, लक्ष्मी शाक्य, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र लोकबहादुर श्रेष्ठको सम्पत्ति स्रोतबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ। दोस्रो सूचीमा रहेका अभिषेक गिरी विराटनगर केन्द्रित आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय हुन्। काभ्रेका बलराम सापकोटा लगायतका सबै क्यासिनोका अवैध लगानीकर्ता हुन्।
तीन महिनामै टुंगो
भारतीय आतंककारी समुह डिमा हलाम डोगाहका कमान्डर चिफ निरञ्जन होजाइले सिंगापुरवाट नेपालमा पठाएको सम्पत्ति आपराधिक गतिविधीवाट आर्जन गरेको दावी सहित शुरु भएको मुद्धा टुंगिन तीन महिना मात्रै लाग्यो।
उनले नेपाली श्रीमती सरिता गिरीलाई सिंगापुरवाट दुई लाख डलर पठाएका थिए। सो रकम आपराधिक भएको दावी सहित भारतीय दुतावासको आग्रहमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले शुरु गरेको अनुसन्धान तीन महिनामा विशेष अदालत पुगेर पैसला समेत भयो।
अनुसन्धानकोक्रममा काठमाडौंमा सरिताको नाममा भएको घरजग्गा र गाडि किन्ने आर्थिक स्रोत नखुलेको दावी सहित होजाई, सरिता र उनका परिवार विरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन अन्र्तगत कार्वाहीको राय दिएको थियो।
होजाईलाई आठ करोड ६३ लाख विगो र चार वर्षसम्म कैद माग भयो। उनी नेपालमा नभएकाले केही भएन। सरिता गिरी राईलाई ४ करोड ५१ लाख बिगो र ४ बर्È सम्म कैदको माग भयो। उनको परिवारलाई त्यसको आधा।
मंसिर २७ वाट शुरु भएको अनुसन्धान फागुन अन्त्यमा टुंगियो। कहलिएका ‘डन’हरुको आर्थिक स्रोतबारे केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले अनुसन्धान शुरु गर्दा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागनै गठन भएको थिएन। सरकारले विभाग गठन गरेर मुद्धा प्रकृयालाई तिब्रता दिने भनेपनी अहिलेसम्म छिनामसिना मुद्धाले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ।
Posted in around the world. LeaveaComment »
« ‘सपनाको अवसान’ साँच्चिकै भोग्नुपर्दा…
रोममा कारको ठक्करले एक नेपाली गम्भीर घाइते »